नेपालका ७० भन्दा बढी जिल्लामा मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको प्रकोप देखिएको छ । वनस्पति विभागले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालमा फैलिएका वाह्य मिचाहा प्रजाति सम्वन्धी पुस्तकमा यो विषय उल्लेख छ । वनस्पति विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म १५ वानस्पतिक परिवार अन्र्तगत २४ जाति र सो अन्र्तगत २६ प्रजातिका मिचाहा वनस्पति पाइएका छन् । चारप्रजातिमध्ये सेतो वनमारा २३ जिल्ला, जलकुम्भी १५ जिल्ला, वनफाँडा ३४ जिल्ला, लहरे वनमारा १२ जिल्ला र सेतो गन्धेझार ५२ जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
वनस्पति विभागको जैविक विविधता तथा साइटिस शाखाकी प्रमुख मधुदेवी घिमिरेका अनुसार मिचाहा वनस्पती एकवर्षीय र बहुवर्षीय झाडी घाँसपात लहरा प्रजातिका छन् । नेपालमा हालसम्म १५ वानस्पतिक परिवार अन्र्तगत २४ जाति र सो अन्र्तगत २६ प्रजातिका मिचाहा वनस्पति पाइएका छन् । सवैभन्दा बढी एस्टेरासी वानस्पतिक परिवार अन्र्तगत कालो वनमारा, सेतो वनमारा, लहरे वनमारा, सेतो गन्धे झार, निलो गन्धे झार, कालो कालो करो, फूली झार, भेंडेकरो, पातीझार लगायतका प्रजाति पर्दछन् ।
धेरै मिचाहा प्रजातिको उद्गमस्थल दक्षिण अमेरिका रहेको पाइन्छ । अमेरिका उद्गमस्थल रहेको मिचाहा प्रजातिको करौंते घाँस नेपालमा पहिलोपटक सन् १८२० मा पाइएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि मेक्सिकोको सेतो वनमारा पनि देखियो । घिमिरेको भनाइमा, मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिहरु रैथाने वनस्पति भन्दा छिटो वृद्धि र परिपक्व हुन्छन् । जरा, काण्ड, पात बिउ आदीबाट सजिलै उत्पादन र पुर्नउत्पादन हुनसक्छ । यी मिचाहा प्रजातिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने भएकाले प्रतिकुल हावापानीमा पनि छिटो फैलन सक्छन् ।
मिचाहा प्रजातिको वृद्धि विकास खाली वन क्षेत्र, खोला तथा नदी किनारमा छिटो हुन्छ । विश्वव्यापीकरण, तिव्र औद्योगिककरण र बढ्दो जनसंख्याको चापलाई सन्तुलनमा राख्न छिटो बढ्ने वनस्पती आयात गर्ने क्रममा यी मिचाहा प्रजाति एक देशबाट अर्को देशमा भित्रिएका हुन् ।
वाह्य मिचाहा वनस्पति जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकिय प्रणालीका लागि ठूलो खतरा बनेका छन् । वनस्पतिविद् डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठ मिचाहा वनस्पतिले प्राकृतिको पारिस्थितिकिय प्रणालीमा अवरोध पु¥याउनुका साथै वन्यजन्तुको आहारा विनाशमा पनि गरिरहेको बताउँछन् । “जव वान्सपतिक प्रजातिहरु अनियन्त्रि रुपमा वृद्धि हुन्छ र त्यसले यहाँका रैथाने वनस्पतिहरुलाई क्षति पुराउँछ, त्यसलाई मिचाह प्रजाति भनिन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन् “हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गरिरहेका निकुञ्जमै मिचाह प्रजातिको प्रकोप बढिरहेको छ ।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेलका अनुसार, वाह् मिचाहा प्रजातिले चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको घाँसे मैदान क्षेत्रमा ठूलो असर गरिरहेको छ ।
ती निकुञ्जहरुमा माइकेनिया, पार्थेनियम, इपाटोरियम, ल्याण्टेना र जलकुम्भिले बढी प्रभाव पारेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गतवर्ष तराईका राष्टिय निकुञ्जमा रहेका २ हजार हेक्टर क्षेत्रको घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र झाडी सरसफाई गरेको थियो । त्यसमध्ये सवैभन्दा बढी ७५० हेक्टर चितवनमा गरिएको थियो भने बर्दियामा ३ सय हेक्टर गरिएको थियो । “वनमाराका लहराले वन्यजन्तुको चरन क्षेत्र ढाक्दा वन्यजन्तु आवतजावत र बसोबास क्षेत्र साँघुरिंदै गएको छ”, कँडेल भन्छन् ।
मिचाहा प्रजातिले वन क्षेत्र मात्र नभइ कृषि र मानिसको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ । ठूलो चरिअमिलो, कालो वनमारा, कुरो, भेंडे कुरो, निलो गन्धे लगायतका मिचाहा प्रजातिले उत्पादकत्व घटाउन थालिसकेका छन् । चाँडै बढ्ने, फैलने यस्ता वनस्पतिले बालीका लागि आवश्यक प्रकाश र तापक्रम सोस्न अवरोध पु¥याउनुका साथै पानीको श्रोतलाई समेत सुकाउने गर्दछ ।
मिचाहा वनस्पति मानव स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक छ । वनस्पति विभागकी घिमिरे प्रोटिनको मात्रा धेरै भएको अफ्रिकन चिप्लेकिरा खाँदा फिलिपिन्समा मानिसहरुमा पक्षघात भएको उदाहरणहरु रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार चिप्लेकरालाई प्रोटिनको आहाराका रुपमा प्रयोग गर्न दक्षिण अफ्रिकाबाट फिलिपिन्स ल्याइएको थियो । तर, त्यसले फाइदाको सट्टा झन हानी गर्यो । “वनस्पति र एनिमल, दुवै मिचाहा हुन्छन, जवसम्म तिनिहरुले नकारात्मक असर गर्दैनन, त्यस वेलासम्म तिनिहरुलाई मिचाह भनिदैन,” घिमिरे भन्छिन् “जव नकारात्मक असर पुग्न थाल्छ त्यसपछि तिनिहरु मिचाहा हुन्छन्,”
१० श्रावण, २०७७